Soo dejisan Folder Lock 7.8 – Vessoft
Bogga rasmiga ah: Folder Lock
Folder Lock – software ah si ay u ilaaliyaan macluumaadka qarsoodiga ah ee user ka dhanka ah ee la daawado iyo koobiyeynta. software The awood si ay u qariyaan files kala duwan, fayl iyo drives maxalliga ah, si sir ah ama password dhigay, waxayna u. Folder Lock waa ay xakameyn karaan helitaanka ah inay xogta on drive flash ah, kaadhka xusuusta, CD, DVD iyo aaladaha kale ee la qaadi karo. software ayaa kuu ogolaanaya in xogta gurmad iyo kaydka macluumaadka ku jira kaydinta daruurtii. Folder Lock sidoo kale safaysaa taariikhda, files haraaga ah iyo raadad kale ee hawsha nidaamka.
Quful oo ka mid ah galalka iyo faylasha
Sirta xogta ku saabsan qalabka la qaadi karo
Soo dejisan Folder Lock
Faallo ku saabsan Folder Lock
Folder Lock Xirfadaha la xiriira
software la set badan oo ah qalab si sir xogta. Waxaa suurogal ah in ay sir ka kooban oo ka mid ah cajaladaha adag iyo sidayaal kale xogta.
Tool koobiyenta faylasha dhexeeya your computer iyo server aamin ah. Software ayaa kuu ogolaanaya in aad edit faylasha qoraalka hoose iyo fog.
Utility si loo ilaaliyo fayl iyo files isticmaalaya lambar sir ah iyada oo suurtagal ah ee lagu hirgalinaayo heerarka kala duwan ee ilaalinta. Software ayaa ilaalineysa warka ka tirtirka shil iyo jeermiska fayraska.
Malwarebytes – softiweer si loo ogaado oo looga saaro fayraska. Barnaamijku wuxuu kuu oggolaanayaa inaad iskaanso nidaamkaaga noocyada kaladuwan ee fayrasyada, spyware iyo hanjabaado kale.
Tani waa software antivirus oo leh horumarin u gaar ah dhinaca amniga, kaas oo bixiya heer fiican oo ka ilaalin noocyada kala duwan ee fayrasyada iyo hanjabaadaha shabakada.
AVG AntiVirus Free – fayras caan ah oo loogu talagalay difaaca aasaasiga ah ee PC-ga ee ka dhanka ah fayrasyada noocyada kala duwan iyo ka-hortagga waxqabadka internetka ee ka dhanka ah khataraha cusub.
Tani waa qalab lagu helo sawirada lumay, xidhiidhada, muyuusikada, diiwaanada wicitaanada ama macluumaadka kale ee noocyada kala duwan ee qalabka Android.
Macmiilku waxa uu awood badan ugu leh shuqulka ammaan la email. Software wuxuu hubinayaa ilaalinta lagu kalsoonaan karo ka dhanka ah spam iyo faylasha waxyeello.